သင့် Mac ပေါ်မှာ Apple TV မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုဖမ်းယူမလဲ ငါက Mac ပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple က TV ကို, Mac OS X ကို, လဲ tutorial
သင်ကေဘယ်လ်တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည် USB type-C Apple TV အသစ်အတွက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ USB Type-C cable ကသင့်ကိုခွင့်ပြုလို့ပါ Apple TV မှဗွီဒီယိုထုတ်လွှတ်ခြင်းထို့ကြောင့် Apple TV မြင်ကွင်းကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ QuickTime ရှိ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကဲ့သို့သောကိရိယာတစ်ခု၏ဖန်သားပြင်ကိုဖမ်းယူခြင်းသည် Yosemite OS X တွင်ပထမဆုံးစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးယခုတွင် Apple TV ၏မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ပြပေးပါတယ်.
အဆင့် 1: Apple TV ကို Mac နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ USB Type-C ကြိုး.
အဆင့် 2: QuickTime စတင်ပါ။
အဆင့် 3: File → New Video Recording ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 4: Record button ဘေးရှိ drop-down menu ကိုနှိပ်ပါ။ Camera နှင့် Microphone အတွက် Apple TV ကိုရွေးပါ။
အဆင့် 5: စတင်မှတ်တမ်းတင်ရန် 'Record' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 6: သင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့် Stop ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 7: မှတ်တမ်းတင်ရန်သိမ်းဆည်းရန် File → Save ကိုနှိပ်ပါ။
သင်သတိပြုပါ HDCP ကာကွယ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, အချို့ဗီဒီယို streaming applications များအတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်သင်တတ်နိုင်လိမ့်မည် ဂိမ်းရုပ်ပုံများနှင့် Apple TV အသစ်၏မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ QuickTime ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာများစွာတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဂျော်ဒီက၎င်းကိုပြည့်စုံစွာရှင်းပြသည် ''သင်၏ Mac screen ကိုအသံသွင်းခြင်းသည် QuickTime နှင့်အလွန်လွယ်ကူသည်'', အကယ်၍ သင်သည် OSX Yosemite တွင်ရှိနေပြီးသင်၏ iOS စက်၏မျက်နှာပြင်ကိုသိမ်းဆည်းလိုပါက ဒီ link ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင့်ကိုသင်ပေးတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple က TV ကို » သင့် Mac ပေါ်မှာ Apple TV မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုဖမ်းယူမလဲ
-Norman astete ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်သူမှအဲဒီဝိုင်ကိုမ ၀ ယ်ဘူးဆိုရင် Apple TV နဲ့ရပ်လိုက်စမ်းပါ။ MAC နောက်တစ်ခု
Norman Astete အားစာပြန်ပါ
Apple TV icon တွေကိုတစ်ပြိုင်နက်ဘယ်လိုပြန်စီစဉ်ရမလဲ